Umncedi Uloliwe House - I-Airbnb
Umncedi Uloliwe House
Indlu yoMncedi likhaya elipholileyo, elinenqanaba elinye elikwiSitrato esiNcedisayo seMbali. Ifakwe kufutshane noMlambo iWalkway, le ndlu inomtsalane ikwindawo efanelekileyo kulo lonke uphononongo lwakho eCentral Utah. Ngaphesheya kwesitrato ngu "Big John" wethu odumileyo, oyena mgodi mde we-Utah, kwaye ungaphantsi kweemayile ezili-10 yiMyuziyam yase-USU yaseMpuma. Ukusuka kwiveranda epholileyo yangaphambili, uya kuba nesihlalo esingaphambili soMnyhadala wobuGcisa woMncedi wonyaka kunye ne "Idolophu yeKrisimesi yase-Utah" iParade yokuKhanya kwesitalato esikhulu.
Sikwane-intanethi yesantya esiphezulu esingenasiphelo (1Gbps) nge-Emery Telcom. Bangabona baboneleli ababalaseleyo kwindawo ngokude. Ithembeke kakhulu! Sibe nabantu abaliqela abasebenza kude ngexesha lokuhlala kwabo kwaye asikaze sibe nezikhalazo okanye imiba.
I-HDTV ene-I-Netflix, I-Roku, I-Amazon Prime Video
5.0 · Izimvo eziyi-143
Esi sixeko sincinci siyindawo efanelekileyo yokuphumla. Ngumthandi wobugcisa kunye neparadesi ethanda imbali kwaye unokuchitha impelaveki uzulazula kwaye uphuma kwiigalari, uphumle kwivenkile yekofu, okanye undwendwele imyuziyam yendawo kunye nezakhiwo ezibuyiselweyo. Yidibanise nosuku okanye ezimbini ukuya kwibhayisekile yasentabeni kunye ne-ATV kwaye unomxube ogqibeleleyo wokuphumla kunye nokuzonwabisa kwangaphandle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Helper